Huawei Watch 2 (2018): Famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Volana vitsivitsy lasa izay, lasa Android Wear Wear ny Android Wear, kinova fanavaozana ny rafitra fiasa, izay misy fiasa vaovao sy fanovana endrika. Na eo aza ny fanovana anarana, zavatra vitsivitsy no niova teo amin'ny tontolo iainana. Mbola mijanona ihany ireo famantaranandro hatreto. Ankehitriny, misy vaovao tonga eny an-tsena. Izy io dia ny Huawei Watch 2 (2018), ny fanavaozana ny famantaranandro marika sinoa.
Ity Huawei Watch 2 (2018) ity dia manaraka ny maodely napetrak'ilay maodely taloha teo amin'ny orinasa. Misy ny fiovana misimisy ihany, na dia tsy fanavaozana na revolisiona ho an'ny marika sinoa aza izany. Manaraka izany dia ambaranay aminao mihoatra ny azonay antenaina amin'ity smartwatch vaovao ity.
Momba ny pitsony dia afaka mahita an'izany isika mitazona ny ankamaroan'ny fiasa amin'ny fiambenana tamin'ny herintaona. Ny orinasa dia tsy nandray risika tamin'ity lafiny ity amin'ny famantaranandro vaovao. Izahay dia mamela anao voalohany amin'ny famaritana ny smartwatch Huawei vaovao.
1 Famaritana Huawei Watch 2 (2018)
Famaritana Huawei Watch 2 (2018)
lafiny: 48,9 x 45 x 12,6mm
lanja: 57 g
efijery: AMOLED 1,2 santimetatra (390 x 390) 327 dpi
processeur: Snapdragon 2100
Fitahirizana anatiny: 4 GB
Rafitra fandidiana: Manaova OS
Conectividad: 802.11n Wifi, Bluetooth 4.1 LE, NFC
Sela Mpandray Hafanana: GPS, tahan'ny fo, hafainganam-pandeha, gyroscope ary barometatra
ny hafa: Fanoherana rano sy vovoka IP68, slot nano SIM na e-SIM
Ny tena zava-misy dia ny rafitra fiasa lehibe, izay manome fiasa samihafa amin'ny mpampiasa sy interface, izay mety tian'ny mpampiasa kokoa. Fa ny marina dia tsy misy ireo fanovana. Ka mahagaga raha nanapa-kevitra ny handefa famantaranandro ny marika sinoa miaraka amina endrika vaovao vitsivitsy eny an-tsena.
Hisy kinova roa ho an'ity Huawei Watch 2 (2018) ity. Ny iray amin'izy ireo dia ny kinova fototra ary manana iray hafa misy fifandraisana 4G izahay. Ao amin'ny tsena Aziatika dia hisy maodely fahatelo miaraka amin'ny eSIM, saingy miahiahy izahay fa hahatratra an'i Eropa izany amin'ny fotoana iray.
Ny vidin'ny kinova fototra dia 1538 yuan, izay manodidina ny 205 euro raha hiova. Raha ny kinova amin'ny famantaranandro misy 4G dia vidiny amin'ny 1988 yuan, izay 270 euro amin'ny fanovana. Ho hita amin'ny loko mainty, volomboasary ary mainty misy antsipiriany mavo izy io.
Azo inoana fa somary avo kokoa ny vidinao rehefa tonga any Eropa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Huawei Watch 2 (2018): Ilay fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Ny fanombohana Galaxy Note 9 dia hahemotra mandritra ny tapa-bolana